737 Max8 4 ọnwa 6 ụbọchị ago #1692
Needchọrọ ntakịrị enyemaka ebe a, enweghị m ike ịchọpụta otu esi egbusi & kwụsị mgbe ị na-abanye max8. Agbalịwo m ihe niile mana m ga-agbada ma enweghị m ike ịkwụsị ma kwụsị tupu ịgbada ọsọ nke runway. Ma ọ bụghị nke a bụ nnukwu mgbakwunye na sim m mana ... Aro tụrụ biko, daalụ
737 Max8 4 ọnwa 6 ụbọchị ago #1693
Enwere m otu nsogbu ahụ ruo mgbe m chọpụtara, ntụpọ akpaaka na-agbanye.
N'ụzọ bụ isi ịkwesịrị ịgbanyụ akpaaka akpaaka tupu ịgbada ma ọ bụghị, agbanyeghị onye na-anya ụgbọ elu na-emegharị onwe ya, ọ ga-eme ka ụgbọelu ahụ na ọsọ na-egosi na ngwa ngwa. Nke a pụtara na ndị livu agaghị eduhie.
Ọzọkwa nwee brake na 2 ma ọ bụ atọ ma ọ bụ max maka runway dị mkpụmkpụ ị ga-echigharịghachi iji tụgharịa ime ka ụgbọ elu gị kwụsịlata
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: oldsailer
737 Max8 4 ọnwa 5 ụbọchị ago #1695
Nke ahụ bụ ihe m na-atụlebeghị, echere m na ị kụrụ azịza ya ... M ga-anwale ọzọ na ụgbọ elu na-esote, daalụ.
737 Max8 4 ọnwa 5 ụbọchị ago #1696
Nsogbu adighi, efe efe
Oge ike page: 0.196 sekọnd